सांसद् नेम्वाङद्वारा ३० वटा योजना छनौट « Mechipost.com
सांसद् नेम्वाङद्वारा ३० वटा योजना छनौट
प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०७६, बुधबार १२:४६
फिदिम, ४ मंसिर
प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वटा योजना छनौट गर्नुभएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकले पाँचथरका ७ वटा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन सञ्चालन हुने योजनाहरु छनौट गरेको हो । छनौट भएका अधिकांश योजना ग्रामीण सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका छन् । बाँकी भवन निर्माण, विद्युतिकरण र खेलमैदानका योजना छन् ।
उपनिर्वाचन हुन लागेका पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, हिलिहाङ र फाल्गुनन्द गाँउपालिकाका लागि एक महिना अघि नै योजना छनौट भइसकेका थिए । जसअनुशार हिलिहाङ गाँउपालिकामा रु. एक करोड कूल लागतका पाँच वटा योजना सांसद् नेम्वाङले छनौट गर्नुभएको छ । यसैगरी फिदिम नगरपालिकामा रु. एक करोड ३० लाख कूल लागतका ६ वटा र फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा रु. एक करोड ६० लाखका १५ वटा योजना छनौट भएका छन् ।
यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निर्देशक समितिको हालै सम्पन्न बैठकले कुम्मायक, मिक्लाजुङ, फिदिम र फालेलुङमा एक÷एक वटा ठूला योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुशार कुम्मायकमा यासोक–भदौरे–साँवाखोला मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि रु. ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी मिक्लाजुङमा दशमी–आरुबोटे–लिम्बा मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि रु. ५० लाख, फिदिममा इथुङ–तमाखे–त्रिवेणी–पञ्चमी दोभान सडकका लागि रु. ५१ लाख ५० हजार र फालेलुङ गाँउपालिकामा मगरचेप्पा–बाँसबोटे–लुवाफू–पापुङदेन–हेवाखोला सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम निर्देशक समितिका सदस्य सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी विनोदकुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो ।